Tetikasa Gemaha any atsimo : hamoraina ny famatsiana herinaratra | NewsMada
Tetikasa Gemaha any atsimo : hamoraina ny famatsiana herinaratra
Nampahafantarin’ny minisitry ny Angovo sy ny rano, Rasoloelison Lantoniaina, ny 8 aogositra teo, ny tetikasa Gemaha*, famatsiana herinaratra any ambanivohitra atao any amin’ny faritra atsimo, hahodina avy amin’ny menaka japtropha.
Nisaoran’ny minisitra ny COI sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa, mamatsy vola izao tetikasa izao hatramin’ny 330.000 euros na 1,155 miliara Ar. Toy izany koa ny fisaorany manokana ny Vondrona eoropeanina, manohana ny tetikasa. Roa taona ny fametrahana azy ho famatsiana herinaratra azo havaozina ho an’ny mponina any atsimon’ny Nosy. « Hisy ny asa aterak’izany », hoy ny minisitra. « Anisan’ny mampihena ny fahantran’ny mponina, ny fahazoany herinaratra azo havaozina sy mora, manampy betsaka amin’ny fampandrosoana ny asa any ambanivohitra. Koa mendrika tohanana ny tetikasa tsara toy izao », hoy ihany ny minisitra.
Anisan’ny fandaharanasa ho fampandrosoana ao anatin’ny tany mpikambana amin’ny COI ny famatsiana herinaratra sy fanatsarana izany, naroson’ny minisitera. Mbola misy tetikasa dimy hafa, momba ny angovo azo havaozina ihany, raha eto Madagasikara. Miasa, ankehitriny, ny minisitera ho fanatanterahana izany, araka ny nambara tamin’ireo mpamatsy vola.
Gemaha* : Génération d’électricité rurale à partir de jatropha mahafalensis au Sud de Madagascar